Madaxweynaha Puntland oo lagu dhoweeyay Magaalada Dhuusamareeb.[Masawiro]
Dhuusamareeb:-Madaxweynaha dowladda Puntland Dr.Gaas iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb waxaan si wadajir ah ugu soo dhoweeyay Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo Madaxa xukuumada Galmudug Sh. Shaakir Cali Xassan.
Wafdiga Madaxweynaha dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali ayaa saakaa ka dhoofay magaalada Garoowe waxaan ay ka qayb gali doonaa heshiis si rasmi ah ay ula saxiixan doonaan Maamulka Gal-Mudug iyo culimada suufiyada ee gacanka deegano dhowr ah oo katriusan Gobolka Gal-gaduud gaar ahaan mgaalada Dhuusamareeb oo ah caasimada maamulka Gal-Mudug,
Madaxweynaha dowlada Puntland Dr.Gaas ayaa markii uu garay magaalada Dhuusamareeb waxaa uu mahad u celiyey Maamulka Gal-Mudug iyo Madaxa xukuumada Galmudug Sh. Shaakir iyo Waxgadardka kale duean ee soo dhaweeyey waxaan uu sheegay in magaalada Dhuusamareeb ay tahay magaaladii uu ku dhashay uuna ku faraxsan yahay in uu yimado.
Dhinac kale magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta maamulka Galmudug ayaa waxaa la filaayaa in ay soo gaaraan madaxda maamul Gobolleedyada dalka ka jira waxaan hadda ku sugan madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan golayaasha dowladda Federalka Soomaaliya,
Madaxweyne Farmaajo oo u tegay Dhuusamareeb si loo dhammeystiro heshiiskii Galmudug iyo Ahlu Sunna
Wed, 01/17/2018 - 14:54
Dhuusamaree:-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku guda jira socdaalka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee uu ku marayo qeybo ka mid ah gobollada dalka ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galguduud si loo dhameystiro heshiiskii Galmudug iyo Maamulka Gobollada Dhexe ee Ahlu Sunnah Wal Jamaaca.
Madaxweyne Farmaajo oo socdaal dhanka dhulka ah ku maraya Gobollada Mudug iyo Galguduud.[Masawiro]
Cadaado:- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo ku guda jira socdaalka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee uu ku marayo qeybo ka mid ah gobollada dalka ayaa gaaray magaalada Cadaado ee Gobolka Galguduud.
“Waxaan ka shaqeynaynaa sidii aan u xoojin lahayn maamulkan, kuna hormarin lahayn deegannada Galmudug, annaga oo u hureyna dadaal kasta oo aan awoodno, idinkana waxaa la idin ka rabaa in aad sii laba laabtaan dadaalkiina.” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Kismaayo:-Waxaa maalintii shalay salaasii casar ka dib ka bilaawday magaalada Kismaayo ee xarunta jubada hoose Nadwo diini ah oo ay ka soo qayb galeen culimo’udiinwaaweyn oo kala kala yimid Gobolada dalka Soomaaliya. Nadwadaan diiniga ah ayaa waxaa culimada ku soo dhaweeyey Sh.Cabdirashiid Weli ibraahim oo ah Gudoomiyaha Mu,asasada Ummah ee Kismaayo, waxaa kale oo hadlay soo dhaweyn ah jeediyey arday wax ka barata skuulada ku yaal magaalada Kismaayo iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jubaland.
Intaas ka dib ayaa waaxaa hadalka qaatay Diktoor Cabdiraxmaan Baarakallah oo soo koobay u jeedada Nadwadaan diniga ah iyo culimada ka soo qaybgashay sida ay ugu diyaarsan yihiin in shacabkooda ka ha qabtiraan baahidooda diinta inta Mu,tamarka socdo.
Culimada ayaa waxaa isla habeenkiiba ay muxaadaraad kale duwan ka galeen masaajidda kala duwan ee ku yaal magaalada Kismaayo waxaana Masjidka Jaamacul Qadiim muxaadaradii ugu horaysay ka jeediyey Sh.Bashiir Axmed Salaad oo ah gudoomiyaha culimada Soomaaliyeed waxaan uu muxaadaradiisa ugu hadlay ( Macnaha ay leedahay walaalnimada Imaanka ku salaysan).
Muxaadarada Sh Bashiir Axmed salaad markii ay dhamaatay ayaa waxaa kalimada tacliiqa jediyey Sh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo aad ugu dheeraaday waxyaabaha xoojinaayaa walaalnimada islaamka iyadoo arrinkaas uu sii xoojiyey Sh Dr,Haaruun Xuseen kana digay waxyaabaha Fasaadiya walaalnimada islaamka.
Culimada ayaa saaka waxaa ay muxaadaraad kale duewan ay ka jeediyeen Ilaa shan Iskuul Hoose dhexe iyo sare, Khaalid bin waliid waxaa kalimada ka jeediyay Sh.Abuu xasaan Ganaane waxaa ka soo jeediyay Sheekh Cabdinaasir Xaaji axmed, Jubba waxaa ka soo jeediyay Sheekh Axmed Cabdisamad, Axmad bin xambal waxaa ka soo jeediyay kalimada Sh. Mukhtaar Axmed Faarax,Farjano waxaa kalimada ka jeediyey Sh. Muxamed Macalim Axmed
Waxaa kale oo ay culimadu muxaadaraad kale duwan ka jeediyeen Radio Xikmaha oo uu ShAxmed Cabdisamad ka jediyey halka TVga Jubaland uu muxaadaro gaar ah ka jeediyey Sh.Abuu Xasaan. Duhurkii ka dib waxaa kalimaad laga soo jeediyay ilaa 6 masaajid oo magaalda ah si deg edeg ah waxaa muxaadaraad kala duwan ka jeediyey Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed halka masjidka Rowdah Baajuunta uu darsi kooban oo walaalynta ka jeediyey Sheekh Axmed Cabdiamad.
Isla duhurkii waxa Masjidka Cusmaan bin cafaan waxaa ka soo jeediyay Kalimad Sheekh Abuu xasaan, Masjidka Xaaji jaamac waxaa ka galay kalimad Diktoor Haaruun,Masjidka Xamsa waxaa ka galay kalimadii duhurka ka dib Diktoor Cabdiraxmaan Baarakallah, Masjidka Taqwaa waxaa ka soo jeediyay Sheekh Muxamed Macalim.
Dhinac kale waxaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo Sh Maxamed Umal oo qayb ka ah Mu,tamarka iyo Barnaamijta Culimada waxaana loo soo dhaweeyay si aad u qurux badan sidoo kale waxaa manta Culimada oo qado u sameeyay Rugta ganacsiga Jubaland oo ganacsatada jubaland ku kulan sanyihiin Waxaana ay aad u soo dhaweeyeen culimada iyagoo tilmaamay in ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada dacwada hiil iyo hooba waxaana kalimaad waano iyo mahadnaq isugu jirta xaflada ka jeediyay Sheekh Bashiir, Sheekh Umal, Sheekh Cabdinaasir iyo Diktoor Baarakallah.
Caawa bacdal maqrib waxaa jiro doona Nadwo wayn oo Sheekh Umal iyo Diktoor Baarakalah ay ka qaybqaadan doonaan insha Allah Waxaana dadka looga jawaabi doonaa su,aalihii xalay ay soo gudbiyeen hadii Allah yiraahdo.
Mon, 01/15/2018 - 17:48
Wafdiga Madaxweynaha ayaa safar dhinaca dhulka ku tagay magaalada Cadaado isaga oo ka yimid magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug.
Madaxweynaha DFS ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyey magaalada Cadaado dadweyne aad u fara badan oo waddooyinka taagnaa, iyaga oo lulaya calanka Soomaaliya iyo Caleemo qoyan .
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa loo gelibiyay Madaxtooyada Cadaado, halkaasoo ay kula kulmayaan Madaxda labada gole ee Maamulka Galmudug iyo qeybaha bulshada.
Ammaanka guud Degmada Cadaado ee xarunta KMG ee Maamulka Galmudug ayaa si aad ah loo adkeeyay, amaanka waxaana la filayaa in Madaxweynaha iyo wafdigiisa ay u sii gudbaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad Goboleedka Galmudug.
Boosaaso:-Sh. Daahir aw cabdi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn ayaa maalintii Jimacada waxaa uu khudbadii Jimce ka dib jeediyey waano guud oo uu ka digayo in dadka Soomaaliyeed dhexdood laga dhex alooso dagaalo ku slaayam qaab beeleed.
Sh.Daahir aw cabdi ayaa waxaa uu ka hadlay colaada ka soo cusboonaatay Gobolka Sool guud ahaan gaar ahaan deeganka Tukaraq oo ay usbuucii la soo dhaafay ciidamo daacada u ah S/land ay qabsadeen halka kuwa Puntland ay ka baxeen deegaanka iyadoo wax dagaal ah uusan ka dhicin.
Sh.Daahir aw cabdi oo ka hadlay masjidka weyn ee Rowda ee magaalada Boosaso ayaa baaq nabadeed u jeediyey maamulka S/land iyo Puntland waxaana uu shiikhu ugu baaqay in la joojiyo colaada oo wax faa’ido ah aan cidna ka helayn bulshada Soomaaliyeedna ay ogaatay khasaraha iyo dhibaaatada laga dhexlay dagaalkii qabilka ee ka dhacay Soomaaliya markii ay burburtay dowladdii dhex ee Soomaaliya.
Sh. Daahir aw cabdi ayaa ku baqay in si deg deg ah loo kala qaado ciidamada isagoo si gaar ah uga codaaday madaxweynaha Puntland Dr Gaas iyo kan S/land Muuse Biixi in la qaboojiyo colaada lagana fogaado dhiig Soomaaliyeed oo isku daata taas oo laga dhaxlayo aduun iyo Aakhiro seeg.
Sidoo kale culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan S/land ayaa marar badan ku baaqay in aan dadka shacabka ah la iska horkeenin oo aan dib loo abuurin dagaaladii sokeeyey ee ka dhacay guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya oo aysan mahdin shacabka Soomaaliyeed ee walaalaha.
Dhinac kale waxaaa wax laga xumaado in wasiirka arrimaha gudaha ee S/land Maxamed Kaahin oo la hadlay saxaafadda ayaa ku hadlay hadalo gef ku ah culimada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan culimada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Puntland isagoona sheegtay in culimada ku nool deegaanada Puntland ay ku baaqeen salaadii Jimce ka dib in lagu jihaado S/land arrinkaas oo ah mid aan sal iyo raadtoona lahayn.
Wasiirka arrimaha gudaha ee S/land Maxamed Kaahin ayaa looga fadhiyaa in uu raalin gelin buuxa ka bixiyo hadalkaas gafka ah ee uusan ka fasiirsan oo uu kula kacay culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Puntland ,Culimadu waxaa ay xambaarsan yihiin waa dhaxalkii Nebigeena Muhamed Nabad gelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaateen waxaan haboon in aan lagu xadgudbin si siman Gobolkii ay rabaanba ha ku noolaadeene maadaama ay u dhexeeyaan umada Soomaaliyeed.
Hoos ka Daawo been abuurka wasiirka arrimaha gudaha ee S/land Maxamed Kaahin
Baaqa Sh.Daahir aw cabdi wuxuu cadayn u yahay in hadalka wasiirku yahay been abuur iyo kicin dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada S/land arrinkaas oo ah mid dhaawacaysa wasiirka arrimaha gudaha ee S/land Maxamed Kaahin.
Hoos ka Dhagayso Baaqa nabadeed ee uu Shiikh Daahir aw cabdi u jeediyey S/land iyo Puntland
Mon, 01/15/2018 - 16:14
Berbera:-Nadwo Cilmiyeedkii sannadlaha ahaa ay 20/1/2018 Habeenka sabtidu soo galayso ka bilaabmi doonto Masjid Jaamica shide yare (Berbera).Waxana ka qaybgali doona culimo iyo Dakaatiro ka mid ah culimadeen waawayn ee dalka oo safaro dheer ka kala yimid waxaan ka mid ah culimadaas :-
Sh maxamed cali gadhle (Hargaysa )
Sh cusmaan cali xuseen (Hargaysa )
Sh dr xasan sh cali warsame (Burco )
Sh xasan khayre dirir (Boorame )
Sh faysal cali faarax (Burco )
Sh jimcaale maxamed xaashi (Berbera )
Sh mustafe aadam maxamed (Burco)
Sh axmed maxamed sulaymaan(laascaanood )Nadwadaan diiniga ah ayaa waxaa ay socon doontaa muddo usbuuc ah . Habeen kastana waxaa la socda Su’aaloaha ay dadweynuhu soo wiidiiyaan culimada.
Mon, 01/15/2018 - 13:30
Gaalkacayo:-daxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo wadatashiyo la leh madaxda iyo qeybaha bulshada ee Galmudug ayaa sheegay in Dowladda Federaalka ah ay go’antahay Nabadeynta Gaalkacayo iyo guud ahaan Gobolka Mudug.
Kismaayo:-Waxa magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ee Jubbaland ayaa waxaa gaaray qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed waxaan culimada loogu soo dhaweeyey si weyn iyagoona culimada ay magaalada ka bilaaban doonto Nadwo diini.
Culimada ayaa markii ay soo gaareen magaalada Kismaayo waxaa ay kulamo gaar gaar ah la yeesheen Madaxda maamulka Jubbaland guud ahaan gaar ahaan madaxweynaha Jubbaland axmed Madoobe oo culimada ku qaabilay Madaxtooyada Jubbaland waxaana ay culimadu ay u jeediyeen dardaaran guud.
Waxaa magaalada Kismaayo mudo usbuuc ah lagu qaban doonaa Mu,tamar weyn oo culimada ka qayb qaadan doonaan insha Allah, waxaa kale oo jiri doona barnaamijyo dacwi ah oo garab socon doona mu,tamarka oo dhamaan qaybaha bulshada ee kala duwan lagula kulmi doono insha allah iyagoo mawaadiic u munaasib culimada ay u jeedin doonaan.
Waxaa kale oo garab socon doono barnaamijtaa Barnaamijka Walaaleenta iyo dabargoynta qabyaaladda oo ah Mashruuc wayn oo in muda ah dalka intiisa badan ka soconaayay iyadoo arrinka walaalaynta bulshada Soomaaliyeed ayaa ka socota Gobolada dalka oo dhan.
Culimada ka qayb qaadan dooona nadwada diiniga ah e tegay Kismaayo waxaa ka mid ah:-
1. Sh.Bashiir Axmed Salaad Gudoomiyaha Culimada Soomaaliyeed.
2. Diktoor Haaruun Sheekh Xuseen
3. Sh.Cabdinaasir Xaaji Axmed
4. Sh.Axmed Cabdisamad
5. Sh.Xassan M. ibrahim Abuu xasaan
6. Diktoor Cabdiraxmaan Sh. Cabdullahi Barakallah
7. Diktoor Cabdiweli Sh. Maxamed Xaaji Yusuf
8 Sh.Mukhtaar Axmed Faarax
9. Ustaad Mursal Shirwac
10. Sh. Maxamed Aadan Waadi
11. Sh.Maxamed Macalim Axmed
12. Sh.Maxamed Cabdicasiis Ducaale
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa la sugayaa in uu soo gaary Sh. Muxamed Cabdi Umal oo qayb ka qaadan doona Nadwo diini ah oo culimadu Soomaliyeed ku qaban doonaa maanta oo Axad ah waxaan la rajaynayaa in culimada ay ka faa’iidaystaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo.
Isimada beesha Tanade oo Sharaf Quraaceed u Sameeyay Madaxwaynaha JFS (Masawiro)
Masawiro Madaxweyne Farmaajo oo lagu soo dhaweeyay Koonfurta Gaalkacyo
Sun, 01/14/2018 - 13:55
Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si weyn lagu soo dhaweeyay Koonfurta Magaalada Gaalkacyo ee Galmudug.waxaana soo dhaweeyey Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf , Wasiiro, iyo Xildhibaano.
Soo dhaweynta Madaxweynaha ayaa waxaa ka qeyb galay sidoo kale dadweyne aad u faro badan kuwaas oo watay calanka Soomaaliyeed iyo kan Galmudug.
Daawo Madaxwaynaha DFS oo si weyn loogu soo dhaweeyey Gaalkacyo[Masawiro+Video]
Gaalkacyo:-Madaxwaynaha dawladda Puntland Dr .Cabdiwe Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo taariikhdu tahay 13-January 2018 ayaa waxa uu kusoo dhaweeyay magaalada Gaalkacayo ee xaruntaa gobolka Mudug Madaxwaynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulahi Farmaajo.
Madaxwaynaha dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Weftigiisa ayaa waxa ay kasoo kicitimeen Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ,halkaas oo maalmihii udanbeeyay safar booqasha ah ku marayeen Madaxwaynaha iyo wefdigiisa.
Madaxwaynaha dawladda Puntland oo ugu horayn ku soo dhaweeyay Madaxwaynaha DF Soomaaliya ayaa yiri,
MADAXWEYNAHA DAWLADDA SOOMAALIYA OO LAGU SOO DHAWEEYEY MAGAALADA GAALKACYO
Madaxweynaha JFS oo si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug
Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Wafdi uu hoggaaminaayo ayaa goor dhow Gaaray Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug . Wafdiga Madaxweynaha JFS ayaa waxaa garoonka Diyaaradaha Gaalkacyo ee Claahi Yuusuf Axmed si diiran ugu soo dhaweeyey masuuliinta heer gobal iyo mid Degmo iyo kumanaan ka mid ah Shacabka ku dhaqan Magaalada Gaalkacyo.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa socdaalkiisa ku weheliya Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo xubno ka tirsan labada gole ee xukuumada Puntland .
Madaxweynaha JFS ayaa waxaa uu u sii gudbi doonaa deegaanada Galmudug oo si weyn loogu diyaargaroobayo soo dhaweyntiisa .
Faahfaahinta iyo Masawirada soo dhaweynta Madaxweynaha JFS ee magaalada Gaalkacyo dib baan idiinka soo gudbin doonaa Inshalaah
Boosaaso:-Madaxwaynaha dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Madaxwaynaha JFS Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta oo taariikhdu tahay 12 jan-2018 ayaa waxaa ay si wada jir ah xadhiga uga jareen dhisme cusub oo shirkada Golis ay ka hirirgelisay magaalada Boosaaso iyo Viber Obtic oo ah khad internet oo badda lasoo mariyey kana hawl gelidoona gobolada Puntland.
Thu, 01/11/2018 - 20:23
Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada oo war ka soo saaray kuraasta banaan ee Baarlamaanka JFS
Muqdisho:-Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa waxaa ay war murtiyeed ka soo saaray kuraasta Xildhibaanada ee ka banaan Baarlamaanka dowladda Federaalka Soomaaliya oo mudo 6 bilood ah banaan waxaana golaha iskaashiga ay ka horyimaadeen go’aanka Maxkamadda sare ee gal dacwadeed ugu furtay kuraasta Xildhibaanada.
Hoos ka akhriso warsaxaafeedka ay soo saareen Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada.